LEGO တိုင်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှအနားယူရန်သတ်မှတ်ထားပြီးအောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးသတင်းဖြစ်သည်
05 / 10 / 2021 05 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 622 Views စာ0မှတ်ချက် Architecture, art, Batman, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2021, BrickHeadz, City, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator 3-in-1, Creator Expert, Dc, DC ကသူရဲကောင်းများ, Disney, DOTS, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, Jurassic World, Lego, Lego Architecture, LEGO Art, Lego Batman, Lego BrickHeadz, Lego CIty, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator 3-in-1, Lego Creator Expert, Lego DC က, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Disney, Lego DOTS, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Friends, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego Jurassic World, Lego Marvel, Lego Monkie Kid, Lego Ninjago, Lego Speed Champions, Lego Star Wars, Lego Stranger Things, Lego စူပါမာရီယို, Lego Technic, Lego Vidiyo, LEGO.com, Marvel, Monkie Kid, Ninjago, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, Speed Champions, Star Wars, Stranger Things, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group, ဗီဒီယို
ဒီနှစ်ငါးယောက်စလုံး Lego ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်အနားယူရန်သတ်မှတ်ထားသောစာရင်းများထည့်သွင်းခြင်းပြက္ခဒိန်များထည့်သွင်းခြင်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်သို့တွန်းပို့သောမော်ဒယ်နှစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရသည်။
A Lego စူပါမာရီယို Expansion Set နှင့်aLego ဟယ်ရီပေါ်တာ BrickHeadz သုံးထုပ်စလုံးကနှစ်ခုပါ မူလစီစဉ်ထားခဲ့သည် ၂၀၂၁ တွင်စင်ပေါ်မှထွက်ခွာရန်ဖြစ်သော်လည်းယခုလာမည့်နှစ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာစာရင်းများသို့အောက်သို့ဆွဲချပါ၊ ထို့နောက်သင့်ကိုပြန်လည်ပြောင်းပါ Lego ဦး စားပေးအလိုက်ဝယ်ယူပါ။
ထိုအပြောင်းအလဲများသည်ဤစာရင်း၏လက်ရှိပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုထောက်ပြသည်၊ ထို့ကြောင့်စောင့်ကြည့်ပါ Brick Fanatics နောက်လအတွက်နောက်ဆုံးစကားလုံးအတွက်လစဉ်လတိုင်း Lego အနားယူရန်သတ်မှတ်ချက်များ အခုလောလောဆယ်မှာသီချင်းတစ်ပုဒ်ချင်းစီရဲ့အခင်းအကျင်းတွေကွဲနေတယ် Lego ဒီနှစ်မကုန်ခင်ငါတို့ sayonara ကိုပြောလိမ့်မယ်။
ဤထုတ်ကုန်အချို့ကို ဖြတ်၍ ရက်ရောသောလျှော့စျေးများကိုအလွယ်တကူမြင်နိုင်သည် Lego VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ နောက်လ၊ ဒါပေမယ့်မင်းအဲဒီထဲကတစ်ခုခုကိုတကယ်စိတ် ၀ င်စားရင်အဲဒါတွေမရောင်းခင်မှာသူတို့ကိုရောင်းတာကပိုပညာရှိတာဘဲ။
အငြိမ်းစားယူရန်စာရင်းများအတွက်အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်မရှိပေ Lego Star Wars ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်တစ်ခုတည်းသောထပ်တိုးခြင်းနှင့်အတူ 75307 Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန်မရ။ သင်တစ်နှစ်တာမတိုင်မီရာသီအလိုက်သတ်မှတ်ထားသည့် Mandalorian minifigures များအတွက်ကုန်ဆုံးရန်သေချာပါစေ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ပထမဆုံးအတွဲတွေထဲကတစ်ခု Lego သံခမောက်လုံး၊ 75276 Stormtrooper သံခမောက်လုံး၎င်းတို့နှစ် ဦး သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်အငြိမ်းစားယူလိမ့်မည် Star Wars Brick Sketches.
ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူနေဆဲဖြစ်ပါသည် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြBlack Seas Barracuda ၏ကပ္ပတိန်နှင့်အမှုထမ်းများသည်မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းသို့နောက်တစ်ကြိမ်ရွက်လွှင့်သည်။ အခြားနှစ်ယောက် Lego Ideas မော်ဒယ်များသည်ပြန်လည်ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှထွက်ခွာလိမ့်မည် 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော နှင့် 21320 ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း တစ်ခုစီသည်ထူးခြားသောအဆောက်အအုံအတွေ့အကြုံများကိုပေးသည်။
ရုပ်ရှင်များမှအခြေခံရုပ်ရှင်များမှ Marvel Cinematic Universe ကိုအဆင့်နှိမ့်လိုက်သည် Lego ဦး ထုပ်အပန်းဖြေ၊ Lego Marvel ဒီဇင်ဘာမှအငြိမ်းစားယူမည့်မော်ဒယ် ၂၀ လုံးနှင့်စက်တင်ဘာလမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။
အထူးသီးသန့် Ghost Rider minifigure 76173 Spider-Man နှင့် Carnage vs. Ghost Rider ဒီနှစ်ကုန်မှာကုန်ဆုံးမှာမဟုတ်သလိုအနည်းဆုံးတော့သူ့ရဲ့လက်မှတ်ပါမီးတောက်ယာဉ်နဲ့မတွဲနိုင်ပါဘူး။
အသစ်အနည်းငယ်ကဲ့သို့စုန်းနှင့်မှော်ဆရာကမ္ဘာသို့သင်ကိုယ်တိုင်သွားပါ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ယခုနှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူရန်စီစဉ်ထားသည်။ စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည် 75957 အဆိုပါ Knight ဟာဘတ်စ်ကားသီးသန့် minifigures များ၊ သုံးထပ်ယာဉ်နှင့်ကျုံ့ထားသောခေါင်းတို့ပါ ၀ င်သောအသေးစိတ်အတွင်းပိုင်းပါ ၀ င်သည်။
40500 Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား Minifigure ဆက်စပ်ပစ္စည်းသတ်မှတ်မည်
75957 အဆိုပါ Knight ဟာဘတ်စ်ကား
Lego နည်းပညာ စက်တင်ဘာလကုန်ကဲ့သို့ ၁၄ အစုံပါရှိသဖြင့်နှစ်မကုန်ခင်အနားယူရန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အပြောင်းအလဲမရှိသောအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုစာရင်းတွင်ထင်ရှားသောမော်ဒယ်များပါဝင်သည် 42083 Bugatti Chiron၎င်းသည် ၂၀၁၈ တွင်စတင်ဖြန့်ချိပြီးနောက်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှနောက်ဆုံးထွက်ခွာလိမ့်မည်။
နာမည်ပြောင်းသည် Lego Creator Expert or လူကြီးများအတွက် Lego စက်တင်ဘာလ၌ဆောင်ပုဒ်သို့ထည့်ထားသောအငြိမ်းစားယူနစ်အသစ်များကိုမတွေ့ရပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြည့်ခြင်းအပါအ ၀ င်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပိုကြီးသောအစုံများကိုမဖမ်းရသေးသောမည်သူမဆို ၁၀၂၆၁ Roller Coaster၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမတိုင်မီ၎င်းကိုလုပ်ချင်လိမ့်မည်။
ငါးယောက်ရွေးချယ်ခြင်း Lego Architecture မော်ဒယ်များသည် skyline တည်ဆောက်မှုနှစ်ခုအပါအ ၀ င်ဒီဇင်ဘာတွင်အငြိမ်းစားယူရန်စီစဉ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ကြီးမားသည် 21046 အင်ပါယာပြည်နယ်အဆောက်အ ဦး အငြိမ်းစားယူတဲ့အထဲမှာပါ ၀ င်တဲ့အထင်ကရမိုးမျှော်တိုက်အပန်းဖြေတာကပိုကြာကြာမ ၀ ယ်နိုင်သေးဘူး။
ခုန်ပါ၊ ပြန်ကန်ပါ၊ ပတ်လည်ရိုက်ပြီးလှည့်ပါ LEGO.com သင်အောက်ပါတစ်ခုခုကို ၀ ယ်ရန်ရှာနေလျှင်ဒီဇင်ဘာမတိုင်မီ Ninjago အစုံ။ Epic Battle Sets များကိုအပြည့်အ ၀ စုဆောင်းခြင်းသည်ယခုနှစ်အကုန်တွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်၊ ၎င်းတို့၏ ၄ င်းတို့အတွက်သီးသန့်နင်ဂျာ minifigures လေးမျိုးကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။
Lego DC စူပါသူရဲကောင်းများသည်အောက်တိုဘာလ၌အပြောင်းအလဲများမရှိဘဲ၊ သိသာထင်ရှားသည် အသစ်အစုံ ပြီးခဲ့သည့်လနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအငြိမ်းစားယူရန်စီစဉ်ထားသည်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့အကွာအဝေးချင်းတူတာကိုး DC နှင့် Batman builds သည်ဧရာမအပါအ ၀ င် ၂၀၂၁ မကုန်မီတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှထွက်ခွာသည် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile နှင့်၎င်း၏ minifigures သုံးခု
အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုသာရှိသည် Lego စူပါမာရီယို ဤလတွင်: 71367 Mario's House & Yoshi ချဲ့စက်များ ယခု ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အငြိမ်းစားယူလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်တွင်အီးစာရှိသည်xtra သေးငယ်သောဗီဒီယိုဂိမ်းတိုးချဲ့မှုများထဲမှတစ်ခုကိုရယူရန်ခြောက်လ
အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Bowser ကိန်းဂဏန်းများကိုပိုကြီးရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် 71369 Bowser ၏ရဲတိုက် Boss တိုက်ပွဲတိုးချဲ့သတ်မှတ်မည် မာရီယိုအတွက်အခြားဝတ်စုံများစုဆောင်းသူများအတွက် Power-Up Packs နှစ်ခုအပြင်ဤနှစ်တွင်ပင်စင်ယူလိမ့်မည်။
Lego ဖန်တီးသူစုဆောင်းသူများသည်ဤရှစ်စုံအတွက်အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ ထူးခြားသောပုံစံအမျိုးမျိုးသည်များစွာကြာကြာမရရှိနိုင်ပါ။ ပြင်ပအာကာသစူးစမ်းလေ့လာသူများရှာဖွေနိုင်သည် 31107 အာကာသ Rover Explorer ကို 3-in-1 အပြင်အဆင်မှာပါတဲ့အတိုင်းမင်းဂြိုလ်သားကမ္ဘာနဲ့ဘဝပုံစံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့မော်ဒယ်တွေ၊ ကြယ်တွေထက်ကျော်လွန်တဲ့တည်ဆောက်မှုအတွက်၊
ပြိုင်ပွဲကနေအဝေးကိုထွက်သွားတယ် LEGO.com ၂၀၂၁ ခုနှစ်မကုန်မီယခင်လကဲ့သို့တူညီသောငါးစုံသည်အခင်းအကျင်း၏အခြားလှိုင်းလုံးများကိုမြင်ရသည်။ မည်သူမဆိုရှာဖွေနေသည် Lego Ferrari, Lamborghini, Audi, Nissan သို့မဟုတ် Jaguar တို့သည်ဘတ်ဂျက်အရသူတို့မအနားယူမီအောက်ပါတည်ဆောက်မှုများကိုမှာကြားလိုသည်။ Speed Champions.
အကြောင်းအရာအနည်းငယ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာကြွယ်ဝမှုကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်သည် Lego Disneyဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများမှသည်ဒဏ္icalာရီလာနဂါးများအထိအရာအားလုံးနှင့်အပိုင်းအခြားကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ Disney အောက်ပါမော်ဒယ်များသည်ယခုနှစ်အကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့် magic သည်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးပေါ်တွင်ထာ ၀ စဉ်မနေနိုင်ပါ။ ဒီထဲမှာပါဝင်ပါတယ် 71044 Disney ရထားနှင့်ဘူတာမင်းမှာရှိပြီးသားဆိုရင်ကောင်းကောင်းတွဲနိုင်တယ် 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် ဒါမှမဟုတ်အသစ်ဝယ်ဖို့စီစဉ်နေတာလား ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်.
ကြီးမားတဲ့ Jurassic Park ကိုမင်းကိုယ်မင်းကြိုဆိုဖို့အချိန်အများကြီးမရှိတော့ပါဘူး 75936 Jurassic ပန်းခြံ: T. rex သောင်းကျန်း မျိုးသုဉ်းရန်စီစဉ်ထားသောအခင်းအကျင်းတွင်ဖန်တီးမှုငါးခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုကြီးတဲ့ပုံစံကမင်းအကြိုက်မဟုတ်ရင်ဒိုင်နိုဆောကိုဗဟိုပြုတည်ဆောက်ထားတဲ့အရင်အပိုင်းတွေလည်းမကြာခင်အနားပေးလိမ့်မယ်။ 75941 Ankylosaurus vs. Indominus Rex st သို့လုံလောက်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုပေးသည်artaJurassic World မျက်နှာပြင်။
အခြားအကြောင်းအရာများစွာကဲ့သို့၊ Lego Monkie Kid၂၀၂၁ အတွက်အငြိမ်းစားယူခြင်းစာရင်းသည်စက်တင်ဘာလတွင်မပြောင်းလဲဘဲဒဏ္legendaryာရီဆန်ဆန်ဖန်တီးမှု ၁၀ ​​ခုကိုဖြန့်ကျက်ရန်စီစဉ်နေဆဲဖြစ်သည်။art LEGO.com.
စဉ် Monkie Kid ခဲ့ စတိုးဆိုင်များရှိစင်ပေါ်မှပျောက်ကွယ်သွားသည်ဆောင်ပုဒ်သည်အွန်လိုင်းတွင်ဆက်လက်ရရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ရှိုးသည် Amazon Prime တွင်လည်းလွှင့်သည် ပထမရာသီအစုံများနှင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com လွန်း။
စတုတ္ထရာသီ Stranger Things တစ်ခုသာရရှိခဲ့သည် trailer အသစ်စက်စက်, နေစဉ် Lego အဖွဲ့၏အခင်းအကျင်းသည်တစ်အုပ်တည်းသာဆက်လက်ဖော်ပြသည်။
စီးရီးပေါ် မူတည်၍ အခြားမော်ဒယ်များကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြေညာခြင်းမရှိပါ 75810 အဆိုပါဇောက်ထိုး လာမယ့်အရစ်ကျမှာသူတို့ပြန်မစခင်သရုပ်ဆောင်တွေအတွက် minifigures တွေကိုရယူဖို့ကမင်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကြီးမားသောအမျိုးမျိုး Lego CITY အစုံများသည်ယခုနှစ်မကုန်မီအငြိမ်းစားယူရမည်ဖြစ်ပြီးအောက်ပါပုံစံအမျိုးမျိုးအတွက်လမ်းဆုံးကိုညွှန်ပြသည်။
စာရင်းတွင်အသစ်ထည့်သွင်းထားသည် 60303 CITY ထွန်းပြက္ခဒိန်ရာသီအလိုက်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲသည်အားလပ်ရက်များအတွက်သာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သဖြင့်၎င်းကိုရယူရန်သင့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်စေသည်။
60303 CITY ထွန်းပြက္ခဒိန်
ပထမလှိုင်း၏လှိုင်းများနှင့်သင်၏အိမ်သို့စတိုင်ကျသောအုတ်အခြေခံအလှဆင်ပစ္စည်းအချို့ယူလာပါ Lego Art ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးထား၍ အငြိမ်းစားယူရန်သတ်မှတ်ချက်များ
မူလကစတင်ခဲ့သော mosaics လေးလုံး Lego Art ဆောင်ပုဒ်အားလုံးသည်နှစ်မကုန်မီငါတို့ကိုထားခဲ့လိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏အိမ်တွင်နေရာတစ်နေရာရှိလျှင်အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသည် artistic အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Star Wars ဒါမှမဟုတ် Marvel ရုပ်ရှင်လောက - သို့မဟုတ်ပင် classic နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းများ
Start အားလပ်ရက်များနှင့် Lego Friends၂၀၂၁ အတွက်ပြက္ခဒိန်အသစ်များကဲ့သို့ထွန်းကားသောပြက္ခဒိန်အသစ်သည်လာမည့်လအနည်းငယ်တွင်သာဆက်ရှိနေလိမ့်မည်။ Lego Friends ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အခြားမော်ဒယ်များစွာကိုလည်းလက်ပြနှုတ်ဆက်လိမ့်မည် Lego အဖွဲ့၏ရှားပါးအုတ်ဆောက်လုပ်ထားသောဆေးရုံများ 41394 သူartအင်းအိုင် City ဆေးရုံ.
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ၊ အားလပ်ရက်များနှင့်ဝေး။ ဝေးသောနဂါးငွေ့တန်း၊ ဤအကြောင်းအရာသုံးခုကိုအတူကစားနိုင်သောအကြောင်းအရာတစ်ခုသာရှိသည် Lego BrickHeadz ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကိုလွှမ်းခြုံထားသော statuettes များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကစားကွင်းကိုပေးသည်။
16 ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း BrickHeadz တည်ဆောက်မှုများသည်တစ်ဝက်အပါအ ၀ င်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှမကြာမီထွက်ခွာလိမ့်မည် Minions အကွာအဝေး 40421 Belle အောက်, ကီဗင်နှင့် Bobနှင့်ကန့်သတ်ထုတ်ဝေမှု 40490 NINJAGO ၁၀မရ။ အခင်းအကျင်းကိုစုဆောင်းသူများသည်တစ်စုံတစ်ရာလွဲမှားပါကလျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်လိုပေမည် BrickHeadz သင်၏စင်ပေါ်တွင်
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, 40496 Voldemort, Nagini & Bellatrix အခု ၂၀၂၂ အထိဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်အဲဒါကိုဖမ်းဖို့မင်းမှာအသက်ရှူဖို့အခန်းနည်းနည်းပိုရှိတယ်။
75317 အဆိုပါ Mandalorian & အဆိုပါကလေး
ဤအငြိမ်းစားများဖြင့်သင်၏ကမ္ဘာကြီးကိုချရေးပါ Lego အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်တည်ဆောက်မှုအတွက်ခွင့်ပြုသည်။ လျှို့ဝှက်သေတ္တာများမှတောက်ပြောင်သည် Lego လက်ကောက်၊ DOTS theme သည်အရောင်အသွေးစုံလင်ရုံသာမက artဖန်တီးမှုကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက် s နှင့်လက်မှုပညာပစ္စည်းများ၊ ဒါပေမယ့်အုတ်ကဲ့သို့ပုံနှိပ်ထားသောကြွေပြားများနှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများကိုစုဆောင်းရန်စျေးမကြီးသောနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ 41921 E ကိုxtra DOTS စီးရီး 3.
Lego Minecraft ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကိုဆက်လက်ဖန်တီးနေဆဲဖြစ်သော်လည်း ၂၀၂၂ ခုနှစ်မကုန်မီ၎င်း၏အစုံအချို့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့တွင်ကြောက်စရာကောင်းသော Ender Dragon ကို ၀ ယ်ရန်စျေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းများပါဝင်သည် 21151 အဆုံးတိုက်ပွဲကြက်တူရွေး၊ လင်းပိုင်နှင့်လိပ်ရုပ်တို့ကိုဖော်ပြရန်တစ်ခုတည်းသောအစုဖြစ်သည် 21152 The Pirate သင်္ဘောစွန့်စားမှု.
နှစ်မကုန်မီအနားယူဖို့စီစဉ်ထားတုန်းပဲပေါ့ 75549 မတားဆီးနိုင်သောစက်ဘီး Chaseတစ်ခုတည်းအဖြစ်၊ Lego Minions သက်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်မဖြန့်ချိခင်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားတယ်။
ရုပ်ရှင်မဖြန့်လျှင်အခြားဖန်တီးမှုငါးခုရှိနေနိုင်သော်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒါပေမယ့် Gru minifigure ကိုရရန်မျှော်လင့်သူမည်သူမဆိုသင် ၀ ယ်ယူရန်အစီအစဉ်မရှိလျှင်စက်ဘီးနောက်လိုက်အတွက် beeline တစ်ခုပြုလုပ်ချင်လိမ့်မည်။ 40511 Minions ကွန်ဖူသင်တန်း.
← LEGO ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Star Wars အရင်းအနှီးသင်္ဘောများသည်အသေးအဖွဲအတိုင်းအတာတွင်ရှိသလား။
LEGO အသစ်တွင်တကယ့် Fender Stratocaster ကိုအနိုင်ယူပါ Ideas ပြိုင်ပွဲ →